Fifidianana kaominaly: tsy hisy tomika ny fikirakirana ny antotan- taratasin’ireo Kandida | Région Boeny
Toky ho an’ny mpifidy nomen’ny Kaomisera nasionalim-pifidianana, Coach Boeny, Atoa Jean, sady solontenan’ny CENI-T Foibe ny hoe” Hitandrina tsara, hanaraka izay voalazan’ny làlam-pifidianana ireo ao anatin’ny OVEC ary hanampy ireo mpisolotena ny Kandida sy Kandida ho fidina amin’ny toro-hevitra sy toro-marika.”
Toy ny any amin’ny Faritany dimy hafa dia ny 18 hatramin’ny 20 febroary 2015 ny fiofanan’ireo mpikamban’ny OVEC (Organe de vérification et d’enregistrement des candidature) Mahajanga na Vaomieran’ny fikirakirana sy fandraisana ny antotan-taratasin’ireo ho kandida Ben’ny tanàna ato anatin’ny Faritanin’i Mahajanga. Ao amin’ny Bloc Administratif Ampisikina Mahajanga no anaovana izany.
Hentitra Atoa Jean amin’ny tokony hitandreman’ny OVEC mafy amin’ny fikirakirana ireo antotan-taratasim-pilatsahana ho Ben’ny tanàna mba tsy hisy fahadisoana satria sarotra hoy izy raha oharina tamin’ny fifidianana farany teo ity kaominaly ity ary ho betsaka ny mpilatsaka ho fidiana sy ireo taratasy ho kirakiraina. Notsiahiviny nefa fa ho fisorohana izay mety fifanolanana dia efa nisy ny fikaonandoha niarahan’ny CENI-T tamin’ny Fitsarana mikasika ny ady amin’ny Fanjakana hanarenana ny tsy mety teo aloha.
Vondrom-piofanana roa samihafa no misy mandritra ireo telo andro ireo. Ny iray dia ny an’ireo ratsa-mangaikan’ny CENI-T rehetra avy amin’ny Faritra efatra, dia Sofia, Boeny, Melaky ary Betsiboka ao amin’ny trano fivorian’ny Bloc Administratif. Izy ireo avy eo no hampiofana ireo ratsa-mangaikan’ny Distrika sy Kaomina any aminy avy momba ny OVEC. Ireo Coach isam-paritra sy Tale teknika ao amin’ny CENI-T foibe ary ny Filohan’ny Fitsarana amin’ny ady Fanjakana Mahajanga no mifarimbona mitarika ny fiofanana.
Ny faharoa dia ny fiofanan’ireo Tompon’andraikitry ny Informatika eo anivon’ny Distrika (CID) sy Faritra (CIR) rehetra ato anatin’ny Faritanin’i Mahajanga, izay atao ao amin’ny Foibem-paritry ny Informatika Boeny, ao amin’ny Bloc Administratif Ampisikina ihany. Atoa Ranaivodimby Alberto, Talen’ny Fikirakirana Informatika (DSI) sy teknisiana iray avy eo anivon’ny CENI-T foibe kosa no mampanao ny fiofanana.
Anisan’ny fandaharam-piofanana notsindriana mafy tamin’ireo vondrom-piofanana roa ireo ny mahakasika ny sarin’ireo ho Kandidà sy ny sary famantarana azy ireo na logo izay ho ampidirina amin’ny Bileta tokana. Sary vaovao miatrika toy ny fanao amin’ny kara-panondro, 4cm fara fahakeliny ny lafiny iray no tsy maintsy takian’ny OVEC sy ny CID amin’ny Kandida. Raiketina amin’ny kapila manjelatra ka tsy maintsy “format JPEG” ary tsy latsaky ny “300dpi ny résolution”, na ny sarin’ny Kandida na ny logo.
Mitontaly 21 ny isan’ny Distrika mandrafitra ny Faritan’i Mahajanga. Ary mijanona ho 2888 ny isan’ny Biraom-pifidianana ny 17 jolay 2015 na dia mety hisy fiovana aza ny isan’ny Kaomina, hoy ny DSI CENI-T.
Nanokatra ny fiofanana ny Lehiben’ny kabinetran’ny Faritra, Atoa Hemedy nisolo-tena ny Lehiben’ny Faritra Boeny, notronin’ireo Tale iraisam-paritra aram-panjakana ato anatin’ny Faritany ary indrindra ny fianakaviamben’ny Fitsarana rehetra eto Mahajanga sy ireo mpitandro-filaminana.